Iindaba - Wamkelekile kwi-Boang Rong's Booth: 17Y24
Nge-13 ka-Epreli 13-16 2021, iChinaplas International Rubber & Plastics Exhibition izakubanjelwa e-Shenzhen Convention and Exhibition Centre. Lo mboniso uza kusebenzisa iipelali ezili-16 kunye neemitha ezisikwere ezingama-350,000 zendawo yomboniso e-Shenzhen Convention and Exhibition Centre. Ngaphezulu kwama-3,600 akumgangatho ophezulu irabha kunye nabathengisi beplastikhi abazakuthatha inxaxheba kulo mboniso, bezisa ngaphezulu kwe-3,800 yeemveliso zoomatshini kunye netekhnoloji enkulu yezinto ezintsha.
U-Chengdu Chuang Rong Co, Ltd uyinkokeli eneminyaka engama-20 yokulinga ekwenziweni kwesitayile sombhobho weplastiki. Sithatha inxaxheba kulo mboniso minyaka le. Imiboniso yethu ephambili zii-HDPE Fittings, izixhobo zokucinezelwa kwe-PP, oomatshini bePlastiki beWelding Welding, izixhobo zePipe, iPayipi yokulungisa umbhobho kunye nokufaka i-Stainless steel ngeli xesha.
Kuyasivuyisa ukubona umelo olomeleleyo kwindawo ye-Cicular Economy evelayo, eyi-erea CHUANGRONG izimisele ngokupheleleyo. Siyayibulela inkxaso esiyifumene kumququzeleli kwaye sijonge phambili kwiziganeko ezizayo.Sifumene abathengi abaninzi abanokubaluleka. Sinqwenela ukuvakalisa umbulelo wethu kumququzeleli, u-Adsale, asifumananga kuphela inkxaso kumnquba, kodwa sikwamkela nombuliso kuncedo lokukhuthaza kunye nonxibelelwano.
Iinkampani ezininzi ezinxulumene nomzi mveliso wokubhobhoza weplastiki uthathe inxaxheba kulo mboniso. NjengeBorouge, iLyondellbasell, i-sinpec njalo njalo.
I-CHINAPLAS iwuchaze kakuhle umxholo wobuhlobo / wokugcina izinto ngoku oqhelekileyo kwilizwe jikelele kwaye ibiyinto enkulu ukungaboni ngasonye kwimveliso efanayo. Siza kuthatha inxaxheba kwi-CHINAPLAS 2022 ngokuqinisa i-ESG / iimveliso zembono yokuzinza. Sijonge ukukubona eShanghai kunyaka olandelayo.